जुलुसमा जाँदै हुनुहुन्छ ? सर्ला नि कोरोना Bizshala -
पछिल्ला दिनमा राजधानी काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा अनावश्यकरुपमा भइरहेको प्रदर्शनका कारण कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा नारा लगाउँदा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएका व्यक्तिबाट कोरोनाको भाइरस सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा डा जागेश्वर गौतमका अनुसार कोरोनाको जोखिम रहेको समयमा अनावश्यकरुपमा गरिने प्रदर्शनले थप समस्या निम्त्याउँछ । उहाँले विपद्का समयमा सामाजिक दूरी कायम राख्न र अनावश्यकरुपमा प्रदर्शन नगर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो, “नारा लगाउँदा कोरोना भाइरस एकैपटक धेरै निस्कने र सङ्क्रमणको मात्रा बढी हुन्छ, त्यसका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नु नै पहिलो आवश्यकता हो ।” उहाँले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष जोड दिएर भन्नुभयो, “भीडभाड जुलुस गर्दा सावधानी नपनाउँदा सङ्क्रमण बढ्छ ।”
शहरी क्षेत्रमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएको खण्डमा बस्ती पूरै सिल गर्नुपर्ने र त्यसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत ठूलो प्रभाव पर्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता डा गौतमले परिस्थितिलाई विशेष ख्याल गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सामाजिक दूरी कायम नगर्दा वा लापरवाही गर्दा निम्तने परिणाम भयावह हुने भएकाले अनावश्यकरुपमा भीडभाड नगर्न अनुरोध गर्दै विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो । कूल ७२ जिल्लामा फैलिएको सङ्क्रमणका कारण जनजीवन सामान्य बनाउन ठूलो मेहनत गर्नुपरेको छ ।
भीडभाड वा जुलुसका कारण अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अत्यावश्यक सेवामा खटिएका कर्मचारी बढी सङ्क्रमति हुनसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । “भीडभाड गर्दा त्यसले उत्पन्न गर्ने परिणाम आत्मघाती हुन सक्छ”, प्रा डा गौतमले भन्नुभयो ।
भौतिक दूरी दुई मिटर बढी हुनुपर्ने, मेडिक वा तीन तह भएको मास्क अनिवार्यरुपमा लगाउनुपर्ने भए पनि भीडभाड र प्रदर्शनमा त्यसको कुनै ख्याल गरिएको छैन । यस्तै मन्त्रालयलाई हालसम्म रु दुई अर्ब ७१ करोड २९ लाख ४७ हजार बराबरको बजेट प्राप्त भएकामा कूल रु एक अर्ब ५८ करोड ५२ लाख ८३ हजार खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सम्पूर्ण विवरण आफूहरुसँग सुरक्षित रहेकोसमेत प्रा डा गौतमको भनाइ छ ।
काठमाण्डौ । पछिल्लो २४ घन्टामा कोरोनाभाइरसबाट थप २ हजार ६०७ जना...
थप २८२८ मा कोरोना पुष्टि, ३०८२ भए डिस्चार्ज
काठमाण्डौ । देशभर पछिले २४ घन्टामा थप २ हजार ८२८ जनामा कोरोना...
एम्बूलेन्सबाटै झलनाथ खनालको ‘लालसलाम’, अवस्था गम्भीर हो ?
काठमाण्डौ । भारतमा फेरि कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट पत्ता लागेको...
थप २७४५ मा कोरोना पुष्टि, ४१८७ भए डिस्चार्ज, कतिले लगाए खोप ?
काठमाण्डौ । देशभर थप २ हजार ७४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको...
नयाँ कोरोना संक्रमतिको संख्या भारतमा ७५ दिनयताकै कम
काठमाण्डौ । छिमेकी मुलुकमा लगातार नयाँ संक्रमित थपिने संख्यामा...
नर्भिकमा असार २८ देखि जेनेटिक ल्याबसहितको आईभीएफ सेन्टर
काठमाण्डौ । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलले असार २८...
काठमाण्डौ । पछिल्लो २४ घन्टाको अवधिमा देशभर संक्रमित थपिनेभन्दा...